Sharciyada qaar ee ku saabsan raacitaanka mootooyinka elektaroonigga ah ee la wadaago gudaha UK
Tan iyo bilowgii sanadkan, waxaa waddooyinka dalka Ingiriiska ku soo badanayay mootooyinka korontada ku shaqeeya ee loo yaqaano (e-scooters), waxaana ay noqotay mid ay aad ugu badan yihiin dhalinyarada. Isla markaana shilal qaar ayaa dhacay. Si xaaladdaas loo wanaajiyo, Ingiriisku...
Wuhan TBIT Technology Co., Ltd ayaa si guul leh u aasaasay
Xafladda furitaanka Wuhan TBIT Technology Co., Ltd ee beerta sayniska jaamacadda Wuhan ee 28th, Oktoobar,2021. Maareeyaha guud – Mr.Ge, maareeye ku xigeenka guud – Mr.Zhang, iyo madaxda la xidhiidha ayaa ku soo biiray xaflada loogu dabaal degayo Wuhan TBIT Technology Co., Ltd oo si rasmi ah u furmay. Waxaan...
Lahaanshaha waayo-aragnimo fiican marka aad isticmaalayso e-baaskiilkaaga WD-325
TBIT waa bixiye xirfadle ah oo bixiya xalal elektaroonik ah oo caqli badan oo leh alaab aad u fiican. Kooxdayada r&d waxay si wanaagsan ugu isticmaaleen tignoolajiyada r&d alaabada si ay u siiyaan adeeg wanaagsan isticmaalayaasha. Dad badan oo badan ayaa jeclaan lahaa inay ku rakibaan aaladdayada baaskiiladooda elektaroonigga ah. Mootooyinka elektaroonigga ah ee casriga ah ee summada h...
Wadaagista ganacsiga mootooyinka korantada ayaa si wanaagsan ugu soo koraya UK (2)
Way caddahay in wadaaga ganacsiga e-mootada ay fursad wanaagsan u tahay ganacsadaha. Marka loo eego xogta ay muujisay shirkadda falanqaynta ee Zag, waxaa jiray in ka badan 18,400 mootooyin ah oo loo heli karo shaqaaleysiin 51 magaalo oo England ah badhtamihii Ogosto, oo kordhay ku dhawaad ​​70% qiyaastii 11,000 bilowgii ...
Wadaagista ganacsiga mootooyinka korantada ayaa si wanaagsan ugu soo koraya UK (1)
Haddii aad ku nooshahay London, waxaa laga yaabaa inaad dareentay tirada mootooyinka korantada oo ku kordhay waddooyinka bilahan. Gaadiidka London (TFL) ayaa si rasmi ah u ogolanaya ganacsadaha inuu bilaabo ganacsiga ku saabsan wadaaga mootooyinka korontada bisha Juun, iyada oo leh muddo ku dhow hal sano meelaha qaarkood. T...
Baaskiilada elektaroonigga ah waxay noqdeen kuwo aad u caqli badan
Horumarinta tignoolajiyada, baaskiilka elektaroonigga ah oo aad u badan ayaa noqda mid caqli badan. Baaskiilada elektaroonigga ah waxay la socdaan dadka, sida dhaqdhaqaaqa wadaagga, qaadista, saadka geynta iyo wixii la mid ah. Suuqa baaskiillada elektaroonigga ah ayaa suurtagal ah, ganacsato badan oo summado ah ayaa isku dayaya intii karaankooda ah si ay baaskiillada uga dhigaan kuwo caqli badan. Caqli badan...
Wadaagista ganacsiga dhaqdhaqaaqa gudaha USA
Wadaagista baaskiilada/e-baaskiilada/mootada ayaa ku haboon isticmaalayaasha marka ay ku socon doonaan gudaha 10KM. Dalka Mareykanka, wadaaga ganacsiga dhaqdhaqaaqa ayaa aad looga mahad celiyay gaar ahaan wadaagga elektaroonigga ah. Lahaanshaha baabuur ayaa aad ugu sareysa dalka Mareykanka, dad badan ayaa had iyo jeer dibadda ula baxa baabuur haddii ay waqti dheer...
Talyaanigu waa in uu ku qasbo carruurta aan qaan-gaarin in ay haystaan ​​shatiga ay ku wadaan mooto
Sida nooc cusub oo ah qalabka gaadiidka, mooto koronto ayaa caan ka noqday Yurub sanadihii ugu dambeeyay. Si kastaba ha ahaatee, ma jirin wax xaddidaad ah oo sharci-dejin ah oo faahfaahsan, taas oo keentay shilalka taraafigga mootada korontadu inay wax ka qabato indho la'aan. Xildhibaano ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee dalka Talyaaniga ayaa soo gudbiyay warqad...
Labada taayir ee korontadu waxay ku dhow yihiin inay dagaal suuqa ku galaan balaayiin doolar oo dibadda ah
Heerka dhexgalka ee labada lugood ee Shiinaha ayaa durba aad u sarreeya. Iyadoo horay loo eegayo suuqa caalamiga ah, baahida suuqa labada lugood ee dibadda ayaa sidoo kale si tartiib tartiib ah u kordheysa. 2021, suuqa labada lugood ee Talyaanigu wuxuu kori doonaa 54.7% 2026, 150 milyan oo Yuuro ayaa loo qoondeeyay barnaamijka